[Xo] Doorka Qoor Qoor & Guriga loo kireeyay Sharif Shiikh Axmed? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Doorka Qoor Qoor & Guriga loo kireeyay Sharif Shiikh Axmed?
[Xo] Doorka Qoor Qoor & Guriga loo kireeyay Sharif Shiikh Axmed?
Siyaasadda iyo Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa ah kuwa si joogta ah isku badbadala iyada oo ayan jirin mabaa’dii rasmi ah oo ay hiigsanayaan. Hadaba asbuucii u danbeeyay waxa magalaada Muqdisho ka socday wadahalado u dhaxeeyay Madaxweyihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd Shiikh Shariif Shiikh Axmad oo dhinac ah iyo Fahad Yasin oo uu la socodo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmad Qoor Qoor oo dhinaca kale ah.’
Wadahadaladaan waxa la dardar galiyay ka dib markii Dowlada Farmaajo ku fashilantay qorshahii waqti kordhinta uu ansaxiyay Baarlaamka waqtigiisa dhamaaday. Goaankaas ayaa waxa si wadajira uga soo horjeestay beesha caalamka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Fahad Yasin oo markii hore gacanta ku hayay Axmad Qoor Qoor iyo Cali Guudlaawe ayaa isaga oo isticmaalayo Axmad Qoor Qoor waxa uu wadahadal toos ah la furay Shiikh Sharif Shiikh Axmad. Wadahadalka ayaa salka ku haya Shiikh Sharif oo noqdo musharax uu taageerayo Fahad mar hadii ay aad u yartay rajadada markale lagu soo dooran karo Farmaajo.
MOL ayaa ilo rasmi ah oo lagu kalsoon yahay u xaqiijeen in talaabadii u horeeysay ee heshiiska labada dhinac gaareen uu ahaa in Shiikh Sharif lagu caaawiyo dhaqaale koooban kaasoo si deg deg ah lagu gaarsiinayo. Hadaba Guriga shalay loogu kireeyay Shiikh Sharif Xaafada Cabdicasis waxaa lacagteeda bixiyay Fahad Yasin oo lacgtaas soo mariyay Axmad Qoor Qoor.
Dhowr tilaabo uu qaaday Shiikh Sharif ayaa aad u fasiraya xiririka cususb ee u dhaxeeya isaga iyo Fahad Yasin.
Shiikh Sharif ayaa gabi ahaanba ka horyimid qorshihii ay horay ugu heshiiyeen Midowga Musharaxiinta ee ahaa in si wadajira looga horyimaado Farmaajo iyo kooxaha uu ku adeegto.
Waxa lagula heshiiyay in uu dego deegaanka Fagax ama agagaarka Hotel Kaah, iyadana waa uu ka soo horjeestay isagoo aan sheegin sababta uu ku diiday.
Kulankii Hawiye ee xalay ka dhacay Hotel Jazeera ee isaga horay loogala tashaday, waxa uu isku dayay in uu ka baaqsado si uu u fashiliyo. Sida aad ka aragteen Taleefishinada, waxa uu yimid shirka daqiiqadihii ugu danbeeyay taas oo timid ka dib markii ka soo qayb-galayaasha shirka ay taleefan ku waaleen, uguna hanjabeen in ay shaaca ka qaadayaan in uu Shiikh Sharif isku dayay in uu fashilyo shirka,
4) Markii la siiyay in uu shirka ka hadlo, waa uu ka gaabsaday, laakiin markii danbe ayuu aqbalay Hal Daqiiqo iyo 47 daqiiqo uu ka hadlay shirkana kama uusan hadlin qodobadii uu balan qaaday in uu ka hadlayo.
5) Inkastaa uu saaxiibadiis u sheegay in uusan marnaba wadahadl la furaynin Dowlad Farmaajo hadana waxa uu si joogta ah xiriir ula leeyahay Fahad Yasin.
Dhanka kale dhamaan saaxiibadii isaga la soo shaqeeyay ayaa gabi ahaanba horay loogu daray golihii wasiirada ee RW soo dhisay! Ragaas wasiirada u ah Farmaajo ayaa wali ku sugan gurigiisa, qaybna ka ah ololahiisa! Arintaan ayaa shaki badan abuurtay.
Arrimahan iyo kuwa kale oo badan ayaa keenay shaki badan oo si tartiib ah u soo shaac baxay oo laga qabo Shariif Shiik Axmed, iyadoo qaar ka mid ah dadka aadka ugu dhow oo la hadlay MOL aay noo sheegeen in la bixin la’ayahay waxa uu rabo iyo ujeedka Shiikh Shariif, halka kuwo kalana aay sheegeen tan iyo markii Guddoomiyaha Golaha Badbaado Qaran loo doortay Cabdi Xaashi in uu gebi ahaanba is bedel ku yimid Shariif Shiikh Axmed waxaana la sheegay in uu rabay in isaga laga dhigo Guddoomiyaha.